Asomafo Nnwuma 26 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Asomafo Nnwuma 26:1-32
Paul yii n’ano wɔ Agripa anim (1-11)
Paul kaa nea ɛyɛe a ɔbɛyɛɛ Kristoni (12-23)
Nea Festo ne Agripa kae (24-32)
26 Agripa+ ka kyerɛɛ Paul sɛ: “Wowɔ hokwan sɛ wuyi w’ano.” Enti Paul teɛɛ ne nsa, na ofii ase kaa n’asɛm sɛ: 2 “Nea Yudafo no de abɔ me sobo nyinaa,+ ɛyɛ me dɛ sɛ wo Ɔhene Agripa anim na merebeyi m’ano nnɛ da yi. 3 Nea enti a ɛyɛ me dɛ paa ne sɛ, Yudafo amanne nyinaa ne nneɛma a wogye ho akyinnye no, wunim no yiye. Enti mesrɛ wo, tɔ wo bo ase tie me. 4 “Nokwasɛm ne sɛ, sɛnea mebɔɔ me bra wɔ me man* mu ne Yerusalem fii me mmofraase no, Yudafo a+ 5 wonim me dedaw no nyinaa nim no yiye. Na sɛ wɔpɛ a, wobetumi adi adanse sɛ mebɔɔ me bra sɛ Farisini+ a odi yɛn som mu amanne so pɛpɛɛpɛ.+ 6 Nanso seesei, ɛbɔ a Onyankopɔn hyɛɛ yɛn agyanom no, ɛho anidaso+ nti na wɔredi m’asɛm yi. 7 Saa bɔhyɛ yi ara nti na yɛn mmusuakuw 12 no resom no denneennen awia ne anadwo, efisɛ wɔn ani da so sɛ ɛbɛba mu. Ɔhene, saa anidaso yi nti na Yudafo abɔ me kwaadu yi.+ 8 “Adɛn nti na munnye nni* sɛ Onyankopɔn nyan awufo? 9 Me nso, na migye di paa sɛ ɛsɛ sɛ meyɛ nneɛma pii de ko tia Nasaretni Yesu din. 10 Na saa pɛpɛɛpɛ na meyɛe wɔ Yerusalem. Mekyeree akronkronfo bebree guu afiase,+ efisɛ minyaa tumi fii asɔfo mpanyin no hɔ.+ Na sɛ ɛba sɛ wobekum wɔn a, na mepene so. 11 Metwee wɔn aso mpɛn pii wɔ hyia adan nyinaa mu, sɛnea ɛbɛyɛ a mɛhyɛ wɔn ama wɔapo wɔn gyidi. Na esiane m’ani a na abere wɔn so denneennen nti, mekɔɔ nkurow foforo so mpo kɔtan wɔn ani wɔ hɔ. 12 “Bere a migu so reyɛ eyi no, da bi, na menam kwan so de tumi ne ahyɛde a minya fii asɔfo mpanyin no hɔ rekɔ Damasko. 13 Ɔhene, bere a menam kwan so prɛmtobere* no, mihui sɛ hann bi a ano yɛ den sen owia fi soro ahyerɛn atwa me ho ahyia, na etwaa wɔn a wɔne me rekɔ no nso ho hyiae.+ 14 Na bere a yɛn nyinaa hwehwee fam no, metee sɛ ɛnne bi reka kyerɛ me wɔ Hebri kasa mu sɛ: ‘Saul, Saul, adɛn nti na woretan m’ani? Sɛ wokɔ so tu wo nan wɔ poma* ano a, ɛbɛyɛ den ama wo.’ 15 Na mekae sɛ: ‘Ɛyɛ wo hena, Owura?’ Na Awurade ka kyerɛɛ me sɛ: ‘Ɛyɛ me Yesu a woretan m’ani no. 16 Nanso sɔre gyina wo nan so. Na eyi nti na mayi me ho adi akyerɛ wo: Nea woahu ne nea mɛma woahu afa me ho nyinaa, mereyi wo sɛ ɛho somfo ne dansefo.+ 17 Na megye wo afi ɔman yi ne amanaman no nsam. Wɔn na meresoma wo akɔ wɔn nkyɛn,+ 18 sɛnea ɛbɛyɛ a wubebue wɔn ani,+ na woadan wɔn afi sum+ mu aba hann+ mu, na wɔafi Satan tumi ase+ aba Onyankopɔn nkyɛn, na ama wɔanya bɔnefakyɛ,+ na wɔanya agyapade wɔ wɔn a wɔanya me mu gyidi ama wɔn ho atew no mu.’ 19 “Enti Ɔhene Agripa, anisoadehu a efi soro no, manyɛ ho asoɔden. 20 Mmom midii kan kasa kyerɛɛ wɔn a wɔwɔ Damasko,+ ɛnna akyiri yi mekasa kyerɛɛ wɔn a wɔwɔ Yerusalem,+ ne wɔn a wɔwɔ Yudea mantam nyinaa mu, ne amanaman no nso. Meka kyerɛɛ wɔn sɛ, wɔnsakra wɔn adwene, na wɔnyɛ nnwuma a ɛkyerɛ sɛ wɔasakra wɔn adwene,+ na wɔmfa so nnan mmra Onyankopɔn nkyɛn. 21 Eyi nti na Yudafo no kyeree me wɔ asɔrefi hɔ a wɔyɛe sɛ wobekum me no.+ 22 Nanso boa a Onyankopɔn aboa me nti na makɔ so atena hɔ abedu nnɛ a meredi adanse akyerɛ nketewa ne akɛse nyinaa yi. Menkaa hwee, gye nea Adiyifo no ne Mose kae sɛ ɛbɛba no.+ 23 Ɛno ne sɛ, Kristo no behu amane,+ na esiane sɛ ɔno na wɔadi kan anyan no afi awufo mu+ nti, ɔbɛbɔ hann ho dawuru akyerɛ nkurɔfo yi ne amanaman no.”+ 24 Bere a Paul reka nsɛm yi de ayi n’ano no, Festo de nne kɛse teɛɛm sɛ: “Paul, worebɔ dam! Adesua bebrebe reyɛ ama woabɔ dam!” 25 Ɛnna Paul kae sɛ: “Onuonyamfo Festo, ɛnyɛ dam na merebɔ. Mmom nsɛm a mereka no yɛ nokware, na m’adwenem da hɔ paa na merekasa. 26 Nea ɛwom ne sɛ, ɔhene a mede ahotoso rekasa akyerɛ no yi, onim nsɛm yi mu yiye, na migye di sɛ nsɛm yi mu biara nni hɔ a ahintaw no, efisɛ emu biara nni hɔ a wɔyɛe wɔ kokoam.+ 27 Ɔhene Agripa, wugye Adiyifo no di anaa? Minim sɛ wugye wɔn di.” 28 Na Agripa ka kyerɛɛ Paul sɛ: “Aka kakraa bi na woama madan Kristoni.” 29 Ɛnna Paul kae sɛ: “Sɛ aka kakraa bi oo, sɛ ɛbɛkyɛ oo, me yam a anka Onyankopɔn ama woabɛyɛ sɛ me. Ɛnyɛ wo nko ara, na mmom wɔn a wɔretie me nnɛ yi nyinaa nso. Afiase nkɔnsɔnkɔnsɔn yi nko ara na mempɛ sɛ wɔde gu mo.” 30 Na ɔhene no sɔree, na amrado no ne Bernike ne mmarima a wɔne wɔn tete hɔ no nso sɔree. 31 Na bere a wɔrefi hɔ no, wofii ase kekae sɛ: “Ɔbarima yi nyɛɛ biribiara a enti ɛsɛ sɛ owu anaa wɔde afiase nkɔnsɔnkɔnsɔn gu no.”+ 32 Ɛnna Agripa ka kyerɛɛ Festo sɛ: “Sɛ ɛnyɛ sɛ ɔbarima yi de asɛm no akɔdan Kaesare a, anka yebetumi agyaa no.”+
^ Anaa “me nkurɔfo.”
^ Nt., “mubu atɛn.”
^ Anaa “awia 12.”
^ Saa poma no yɛ abaa a ano yɛ feafea a wɔde ka aboa.
Asomafo Nnwuma 26